Dhageyso: Xasan Sheekh oo weerar kale ku qaaday madaxda DF “Meel xun ayay mareysaa arrinta….” | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Dhageyso: Xasan Sheekh oo weerar kale ku qaaday madaxda DF “Meel xun...
Dhageyso: Xasan Sheekh oo weerar kale ku qaaday madaxda DF “Meel xun ayay mareysaa arrinta….”
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhaliilay Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya in xilligaan ay aad u la dagaalamaan xurridda hadalka oo uu sheegay in dad badan laga hor-istaagay.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Siyaasiyiinta iyo Warbaahinta ay dowladdu caburisay oo aysan hadli karin,isaga oo xusay in aan waqtigaan dowlada sidaasi looga baahneyn.
Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ee hadda jirta ay waajib ka saaran tahay helitaanka xaquuqda Dastuuriga ah ee muwaadinka xaqa uu u leeyahay.
“Runtii xilligaan xurriyadda hadalka waxa ay mareysaa meeshii ugu xumeyd,balse ay la wadaageen madaxda Dowladda si loo yareeyo caburiska lagu haayo Siyaasiyiinta iyo Warbaahinta Madaxda banaan ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiligii uu talada dalka hayay waxaa lagu eedeynayay in uu caburin ku haayay siyaasiyiinta iyo Wariyeyaasha Soomaaliyeed,waxaana la xiray dhowr mar wariyeyaal iyo Idaacaddo ku yaalla Magalada Muqdisho.
Previous article‘SOMALIA iyo Kenya oo ku heshiiyey in si hoose loo xaliyo xiisada siyaasadeed’
Next articleMaamul goboleedyada Soomaaliya miyay ka hareen siyaasadda arrimaha dibadda?
DHAGEYSO:Taliye Mahad oo ka hadlay arimo xasaasi ah oo maalmahan qabsaday warbaahinta
Maxaad ka taqaan Xeer Ilaaliyaha cusub ee Qaranka? (Akhriso Taariikh nololeedkiisa)
Xog: Sidee ayey Qatar ugu shaqeysay heshiiska DF iyo Waare (Waare oo saddex ku beddeshay heshiiska)
Ciidamada cirka Itoobiya oo bilaabay duqeyn ay ka fulinayaan gobolka Tigreeda